दिवाकरको सरलता र पासाङका सपनाहरु	Postpati – News For All
मनऋषि धिताल २०७६ भाद्र ३०,सोमबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : ८ मिनेट
मनऋषि धिताल ।
यहाँबाट राङसीको डाँडागाउँ माथिको टाकुरामा ठुल्ठुला चौरहरु देखिन्छन् । कमरेड पासाङ क्रान्ति सम्पन्न भएपछि त्यो चौरलाई हवाई मैदान बनाउन उपर्युक्त हुने बताउनु हुन्छ । म विश्लेषण गर्छु– युद्ध लडिरहेको एउटा जन सैनिक कमाण्डर, विगतमा आफूले पढाएको विद्यालयमा अहिले पनि पढाइ रहेको सपना देखिरहन्छन् । र, क्रान्ति सम्पन्न भएपछि यही विकट वस्तीमा हवाई सेवा पु¥याउने भविष्यको परिकल्पना पनि गरिरहन्छन । दाउरा, घाँस गर्न बन आएका गाउँलेहरु र गोठालालाई कमरेड पासाङ अभिबादन गर्नुहुन्छ । नमस्कार फर्काएर एउटी बुढी आमैले सोध्नु भयो– “ओहो ! मैले बल्ल चिने । अब घर कहिले फर्कने बाबु ?” पासाङले हाँस्दै भन्नुभयो– “अब जितेपछि फर्कौला । तपाईहरुले आशिष दिनुहोस् आमै ।” ती बुढी आमा आशिष दिदैं हुनुहुन्थ्यो– “दुश्मनको नास होस् वावै तीम्रो जीत होस् ।” पासाङ फूर्सद भएमा जनसेनासँग भलिवल खेल्नु हुन्थ्यो ।
क्यारेमवोर्ड र चेस पनि जनमुक्ति सेनाहरुले मनपराएर खेल्ने खेल हुन् । यात्राका क्रममा बाटोमा भेटिएका स–साना बजारमा जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरु क्यारेमवोर्ड खेलिरहेका हुन्थे । क. दिवाकर क्यारेमवोर्ड खेलीरहेका जनसेनाको झुण्ड नजिकै गएर केही समय भूल्नु हुन्थ्यो । चिन्नेले आश्चार्य मान्दै अभिवादन गर्थे । कमरेड दिवाकर चेस खेल पनि निकै मन पराउनु हुन्छ । एकदिन जनमुक्ति सेनाका व्रिगेड कमाण्डर जीत र वटालियन कमाण्डर जोहार बीच चेसमा चर्काचर्की परिरहेको थियो । सवै ठाउँमा कमजोरहरुको पक्ष लिन चाहने क. दिवाकर यहाँ पनि खेलको अन्ततिर हार्नै लागेका जोहारको पक्ष लिन थाल्नु भयो । तर भेरी–कर्णालीका जनसैनिक कमाण्डर जीतले विशेषका जनसैनिक कमाण्डर जोहारलाई हराइदिनु भयो । यसपछि जनमुक्ति सेनाका मंगलसेन पहिलो व्रिगेडका कमिशार सुनिल र इन्चार्ज क. दिवाकर बीच चेश भीडन्त जारी थियो । खेलकुद पत्रकारितामा कुनै पनि दखल नभएकाले म त्यहाँबाट विदा भए ।
(१५ बर्ष अगाडिको जनादेशमा प्रकाशित लेख मनऋषि धितालको फेसबुक भित्ताबाट )